इबरा : सम्झनाहरूमा - खबरम्यागजिन
Homeशब्दमैले चिनेकोइबरा : सम्झनाहरूमा
March 11, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मैले चिनेको, म्यागजिन, शब्द 0
इबराका चार अवतार
मेरो विचारमा इन्द्रबहादुर राईउर्फ आईबी राईका मुख्यतः चारवटा अवतार छन्।
पहिलो, उनी नेपाली यथार्थवादी आख्यानका महान् कलाकार हुन्। उनको उपन्यास ‘आज रमिता छ’ र कथासंग्रह ‘विपना कतिपय’ नेपाली साहित्यमा व्यापक रूपले पढिएका र चर्चा गरिएका, व्यापक रूपले प्रशंसित र आलोचित कृतिहरू हुन्। आईबी राईको दोस्रो अवतार हो— उनी आयामेली आन्दोलनका परिकल्पनाकार, व्याख्याता र प्रवक्ता तीनैथोक हुन्।
उनका शब्दमा तेस्रो आयाम साहित्यमा बौद्धिकता थप्ने र जीवनका तीनै आयामलाई झ्याप्पै छोप्ने साहित्यिक पारा हो। उनको तेस्रो अवतार हो— उनी साहित्य सिद्धान्त र साहित्य समालोचनाका ठूला पण्डित हुन्। उनको ‘नेपाली समालोचनाका आधारहरू’ भन्ने ग्रन्थ वास्तवमा नेपाली समालोचनाको आधारस्तम्भ नै बनेको छ।
र, आईबी राईको चौथो अवतार उनको लीलालेखनमा प्रकट भएको छ। मलाई उनको लीला लेखनचाहिँ बुढेसकालको वैराग्यको अभिव्यक्तिजस्तो लाग्छ, जसमा उनको लेखन जीवनको यथार्थ परिवेशबाट चिप्लिएर र बत्तिएर कतै अमूर्ततातिर बेगिएको छ। त्यसो त तेस्रो आयामको पछिल्लो चरणमा नै उनको लेखनमा मनग्गे क्लिष्टता आइसकेको छ। खास गरेर ‘हामीजस्तै मैनाकी आमा’ र ‘खाल्डो’जस्ता कथामा पुग्दा आई बी राईको प्रयोग प्रयोगका लागि प्रयोग ज्यादा र जीवनको बोधगम्य अनावरण कम भइसकेको छ। यहाँ पनि राईको प्रयोग जीवनको जीवन्त धरातलबाट उछिट्टिएर कतै शून्यतिर बहकिएझैं लाग्छ।
म समग्र नेपाली साहित्यमा खासगरी पाँच जना कथाकारलाई नेपाली कथाका देउराली मान्छु। यो मेरो नितान्त निजी चयन वा रोजाइ हो। यी पाँच देउराली हुन्— विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गोविन्दबहादुर मल्ल (गोठाले), पारिजात, रमेश विकल र इन्द्रबहादुर राई। नेपाली कथाका यी पाँच देउराली कथाका पाँच पृथक् र विशिष्ट प्रवृत्तिका स्वनामधन्य प्रतिनिधिहरू हुन्।
अब एक फुटकर टिप्पणी। इन्द्रबहादुर राईको अर्को एउटा अवतार ‘साहित्यको अपहरण’मा अभिव्यक्त छ। यस अवतारमा राईले माक्र्सवाद–प्रेरित प्रगतिवादी साहित्यमा कलाको नांगो अपहरण हुन्छ भनी चर्को जिरह गरेका छन्। राई कला वा शिल्पद्वारा नसिँगारिएको लेखन नारा, रुढी, भजन, भक्ति वा स्तुति हो भनी भयंकर तर्क गर्छन्। यहाँ राईका विचारहरू निश्चय नै विचारणीय छन्।
तर, यो विमर्श दार्जिलिङको रैथाने गुट द्वन्द्वबाट उत्पन्न तिक्तता र कताकति क्षुद्रतासमेतले भरिपूर्ण छ। राईले क्रुद्ध आवेगबाट वशीभूत भई उनको बौद्धिक श्रेष्ठता र मर्यादित तर्कशीलताबाट बाहिर निस्केर प्रगतिवादीहरूलाई कति हो कति होच्याएका छन् र गिज्याउनुसम्म गिज्याएका छन्। तथापि, मेरो विचारमा आईबी राईको सौन्दर्यशास्त्रीय ऐनामा आफ्नो अनुहार हेर्न प्रगतिवादीहरूका लागि श्री राईको यो सर्वाधिक पठनीय कृति हो।
इन्द्रबहादुर राई बडो सौभाग्यशाली लेखक रहेछन्। उनले जीवन बिसाउनुभन्दा केही अघिमात्र अनुवाद कलाका दुई अब्बल प्रतिभा मञ्जु श्री थापा र प्रवीण अधिकारीद्वारा अनुदित आफ्ना दुई कृति ‘आज रमिता छ’ र कथासंग्रह अंग्रेजीमा देख्न पाए। मानौं यो देख्नकै लागि उनी यतिन्जेल बाँचेका थिए।
९१ वर्ष मनग्ये लामो जीवन हो। इन्द्रबहादुर राई भव्य जीवन बाँचे र भव्य मृत्यु मरे। श्री राईप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।
‘आईबी : दार्जिलिङका मदनमणि’
काठमाडौँ — आईबी राईसहितको तीन सदस्यीय लेखक टोलीले सन् ६० को दशकमा जन्माएको ‘तेस्रो आयाम’ पत्रिकाको वर्ष १, अंक १ मै भनिएको छ, ‘हामी नबुझिने बनौंला । तर लोकप्रियताको लोभ गरिरहे केही लेख्न सकिन्न । हामीले अहिले सफलतादेखाउन नसकेका हौंला, पछि जरुर सक्नेछौं । पछि आउनेहरूले त्यो गर्नेछन् र, गरिछाड्नेछन् । कारण मानिसको शरीर छाडी अरू केही पनि मर्दैन । विचार मर्दैन ।’ (१–४–१९६३) नभन्दै आईबी सर (मेरो टर्नबुल स्कुलका गुरु) ले शरीर छाडेर गए । विचार बाँचेकै छ । यसो भनिरहँदा आईबी सरको ‘आज रमिता छ’ उपन्याससँगको असहमति र पूरापूर संस्कृते–लेखाइको नमिलेको कुरो मेरो चासोमा सधैं रहिरहयो । ‘आज रमिता छ’ को सबैतिर वाहवाही सुन्छु । तर यो यतिबिघ्न ‘संस्कृते’ छ नि, यसलाई पहिला नेपालीमा अनुवाद गर्नु जरुरी छ । नेपालमा मदनमणि दीक्षितको ‘माधवी’ जस्तै । भन्नैपर्छ— दार्जिलिङको मदनमणि दीक्षित भनेको इन्द्रबहादुर राई हो । नेपालको इन्द्रबहादुर भनेको मदनमणि हो । मैले कतै पढेको छु— ‘माधवी’ का १ हजारभन्दा बढी संस्कृत शब्दको नेपालीकरण गरिएर ‘माधवी’ पुनर्लेखनमा आउँदै छ । हो, ‘आज रमिता छ’ लाई पनि यसै गर्नुपर्छ । यसलाई दार्जिलिङको बोली र टोनमा झार्नैपर्छ । त्यो संस्कृते भाषा उता दार्जिलिङको हुँदै होइन । सायद यता फिक्कलमा शिक्षक भएका बेला भाषाविद् महानन्द सापकोटाको संगत र प्रभावले गर्दा होला, आईबी सरले आफ्नो लेखाइलाई पूरै ‘संस्कृते’ बनाए । पादरी गंगाप्रसाद प्रधानले सन् १९२३ तिरै ‘गोर्खे खबरकागज’ मा काशी, बनारस, पटनातिर बसेर आएका अथवा पढेर आएकाहरूको भाषालाई ‘काँशीभाषे बोली’ भनेको थिए ।
फेरि ‘आज रमिता छ’ दार्जिलिङे कथा हुँदै होइन । मञ्जुश्री थापाले किन रोमाञ्चित भएर अंग्रेजी अनुवाद गरिन्, म भन्न सक्दिनँ । उपन्यासमा भनेजस्तो उताको समाजमा मेलमिलाप थियो भन्ने कुरा पनि ‘मिथ्या’ हो ।
आईबी राईले नेपाली भाषाका पक्षमा जे जति कुरा गरे पनि त्यसलाई नेपाली भाषा भन्ने कि गोर्खे भाषा भन्ने अन्योल रहिरहयो । उताका नेपालीहरू गोर्खाल्यान्डका गोर्खेहरू भए । अर्को कुरा, आईबी सरले दार्जिलिङमा नेपाली भाषाका लागि जे जति गरे, त्यो उनी एक्लैले गरेका होइनन् । धेरै योग्य–योग्य मानिसहरू उता थिए । खर्साङका प्रेम थापा, जोनाथन थापा, तारकबहादुर कार्की, गुमानसिंह चामलिङ, एडोल्ड रोङगोङ, गणेशलाल सुब्बाहरू र अरूहरू पनि थिए । पक्कै पनि आईबी सर यो ‘फोर्स’ को मियोमा थिए ।
उपन्यासबाहेक बरु आईबी सरका कथाहरूमा घटेकै कुरा छन्, त्यहाँ भएकै विवरण छन् । बर्माबाट लखेटिएका नेपालीको दु:खान्त होस् अथवा घरघरमा भेटिने जारका कुरा । अझ किरातीहरूको त दूधैदूध मिसिएर दाजुबहिनी, फुपू–भदै भएको अवस्था पनि छ । यी एकदमैं भएका कुरा हुन् । त्यसमाथि ठयाक्कै दार्जिलिङे टोन, लवज, कथ्य पनि छ कथाहरूमा । बर्माबाट भागेर आएका नेपालीहरू भारतको कुनाकन्दरामा बिलाएरै गए । यो यथार्थ हो । ‘जयमाया लेखापानी आइपुगी’ को संवेदना शाश्वत छ ।
‘भाषिका’ भनेको जनजिब्रोको बोली हो । उता भाक्सु, देहरादुनतिर गयो भने ‘ठेर–ठेर, मैं भी आउँछु’ भन्छन् । ‘कता पधारिराछस् ?’ भन्छन् अथवा ‘यो लोगहरू कहाँबाट आए ?’ भन्छन् । यो लोकल–डाइलेक्ट हो नि । यसलाई त्यहींको भाषा, साहित्य, लवजमा फिट गर्न सकेको स्वाद अर्कै हुन्छ । तर, हाम्रो दार्जिलिङमा संस्कृतै–संस्कृत कहाँबाट आयो ?
‘आज रमिता छ’ मा कतै ‘बायुद्धार’ भनेको छ, कतै ‘बिस्तृण जलराशी’ । यो बायुद्धार भनेको त भेन्टिलेसन भनेको पो रहेछ । यस्तो क्लिष्टतामा, स्थानीयतामा नमिलेको लवजबारे अभि सुवेदी, राजनारायण प्रधान, रविलाल अधिकारीजस्ता विज्ञ समालोचकहरूले पनि कहीं कतै केही
बोलेको मलाई थाहा छैन । म त आईबी सरको सामु एउटा फुच्चे न थिएँ, कहाँ बोल्ने आँट गर्नु ?
जाति र जातित्वको कुरामा, पहिचान र अस्तित्वको कुरामा आईबी सरले दार्जिलिङलाई नै ‘आफ्नो नेपाल’ भनिरहे, लामो कालसम्म । ‘नौ लाख तारा’ गीतका रचयिता अगमसिंह गिरीसँगै यही गीतका कारण आईबी सरको टकराव परेको थियो, बेमेल भएको थियो । हरेक डिसेम्बर महिनामा चल्ने कोचिङको एउटा क्लासमा आईबी सरले हँसीमजाक गर्दै भनेका थिए, ‘हन ए केटा हो, यो नौलाखे तारा भन्ने गीत छ नि अगमसिंह गिरीको । यो गीत त के हो ? उल्टापाल्टी पो छ त । ‘शरद लाग्यो बनमा फूलले पीर्ति गाँसेछ’ पो भन्छ त ।…’
तर, प्रवासमा बसेका नेपालीको दु:खान्तलाई १६ लाइनमा बुझाउन खोज्नु कम्ती मुस्किलको काम थिएन । अगमसिंहले खासमा नेपाली गाथा बुझाउन खोजेका थिए । ‘नसम्झ आज नेपाली सन्चोले यहाँ बाँचेको’ भन्नु आफैंमा एउटा काव्य हो, २ सय वर्षदेखि बेहोरेको नेपालीको गाथा यसमा छ । तर, आईबी सर भने यो गीतको ‘नजाऊ फर्की नेपाल’ को लाइन आउँदा भने सर खुसी देखिन्थे, रमाउदै भन्थे, ‘होहो, सही हो…’ ।
मलाई के लाग्छ भने मान्छेलाई देवता बनाउनु हुँदैन । आईबी दाजु पनि देवता होइनन् । पक्कै पनि त्यो बेलाको पढाइको ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ हो आईबी । ठूलो सर्भिसमा जान सक्ने, विदेश गएर केही गर्न सक्ने, आफ्नै बुतामा अरू कमाइधमाइका काम गर्न सक्ने स्थिति उनमा थियो । राम्रो पढाइको स्कलरसिप पनि पाउन सक्थे । तर कतै गएनन् । खालि साहित्य, भाषा भनेरै कुवामा बसिरहे । म कतिपय अर्थमा कुवाको भ्यागुतो भन्छु आईबी दाजुलाई । उनले दार्जिलिङे कुवामै बसेर संसार पढे । सेक्सपियरदेखि सोपेनआवरसम्म, माक्र्सदेखि नित्सेसम्म खर्लप्पै खाए । तर बाहिरी दुनियाको ‘एक्सपोजर’ भएन कहिल्यै । मलाई लाग्दैन, आईबी दाजु अमेरिका–बेलायत गए (मैले थाहा नपाएको होला ।) टर्नबुल स्कुलको टिचर र साहित्य लेखन, यी दुई जिम्मेवारीमै जीवन गुजारे ।
खासमा नेपाली मिडिया र केही समालोचकले पनि आईबी सरलाई नेपाल–भारतको, नेपालीभाषीको ‘ब्रिज’ भनिरहेका छन् । तर, आईबी सर स्वयम्ले यो कुरा मानेकै थिएनन् । ‘हाम्रो नेपाल यही हो’ भनेर उता बसेका थिए । उताबाट लैनसिंह, रणधीर सुब्बा, अम्बर गुरुङ, गोपाल योञ्जनहरू कोही पनि यता आएको आईबी सरलाई मन परेको थिएन । त्यसबेला भारतीय नेपाली हुनुको हकमा त्यो कुरा बोलिएको थियो । तर, अहिले त्यहाँकाले आफूलाई भारतीय नेपाली हौं भन्दैनन् । त्यतातिर गोर्खा, गोर्खे सुरु
सन् ८० को दशकमा गोर्खाल्यान्ड प्रकरणमा घर जलाइदिएपछि र दार्जिलिङबाट निर्वासनमा परेपछि मात्रै आईबी सरले नेपालतिर फर्केर हेरेका हुन् । नेपाल त सधैं स्वागतमा तत्पर थियो नै । आईबी सर उता माया नपाएपछि यता आएका हुन्, माया खोज्दै । यत्ति हो कि यत्रो विचारक र बौद्धिक व्यक्तिले पढेर, बुझेर पनि खालि शिक्षक बनेरै र भाषा–साहित्य भनेर कलम चलाएरै जीवन बिताएको दृश्य मेरा लागि अलौकिक छ, एकदमै प्रशंसनीय ।
(कुराकानीमा आधारित)/ कान्तिपुर कोसेली-ाट साभार
6 मार्चको पीडा
डा. राजेन्द्र भण्डारी
६ मार्च २०१८ मा नेपालीभाषीहरूको पोथ्राबाट इबराको चिदात्मा–चरो फुर्र उडेर अनन्त आकाशमा बिलायो । ‘अर्को इन्द्रबहादुर राई कहिले पाइएला’ को आशामा हामी भविष्यतिर आँखा ओछयाइरहनेछौँ । इन्द्रबहादुर राईको निधन भनेको गाउँबीच गजधम्म बसेको विशालकाय वटवृक्ष गडयाम्म ढल्नु हो । भारतका नेपालीभाषीहरूको बौद्धिक ओत, अडेसा, प्रेरणामूर्तिको सतत क्षय हो । एकाएक टुहुरो हुँदाको अनुभव हो । ६ मार्च २०१८ को साँझले यस्तै अवसाद बोकेर ल्यायो । नेपाली साहित्य नै हल्लियो । पराकम्पन अझै छ । ६ मार्चको ‘रातभरि हुरी चल्यो’ । ७ मार्चमा ब्युँझिँदा घरको गारो ढलेको पायौँ । छानु उडेको पायौँ । मनमा गह्रौँ लोला झुन्डेको अनुभव गर्‍यौँ ।